Fitaterana any Bhutan
Ny fanjakan'i Bhutan dia firenena goavambe kely voahodidin'ny tendrombohitra Himalayana, izay tsy manenjika teknolojia maoderina, ary mahatalanjona ny isan'ireo tempoly bodista. Na izany aza, na inona na inona izany, ary ny olana ara-tontolo iainana manerantany sy ny olana dia mandany ny saran-dalana, ary na dia amin'ny fiandohan'ny hatsarana sy ny fahazavana aza, dia manontany ny mpitondra any Bhutan ny mpandeha rehetra. Andeha hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny safidy misy amin'izao fotoana izao ho an'ny mpizaha tany.
Fifandraisana amin'ny rivotra
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Bhutan dia iray ihany - eo akaikin'ny tanànan'i Paro . Nandritra ny fotoana lava dia ny serivisy fiaramanidina tokana tao amin'ny firenena, saingy tamin'ny 2011 dia niova ny toe-draharaha. Avaratry ny seranam-piaramanidina kely roa no nosokafana tao Bumtang sy Trashigang , saingy izy ireo dia misidina fiaramanidina irery ihany. Ankoatr'izay, ny seranam-piaramanidina seranam-piaramanidina hatramin'ny volana Oktobra 2012 dia eo amin'ny sisintany miaraka amin'i India, akaikin'ny faritry ny tanànan'i Geluphu. Noho ny fitomboan'ny fizahan-tany, ny governemanta dia miasa am-pahavitrihana amin'ny famoronana serivisy kely vitsivitsy manerana ny firenena. Na dia izany aza, ny 2016 ihany no safidy sarobidy tsy maintsy halefa any Bhutan ho an'ny mpizaha tany dia mbola fitaterana omen'ny mpizaha tany.
Angamba ity no endrika sy fifandraisana indrindra amin'ny fitaterana any Bhutan. Misy lalana 8000 km eo ho eo, ary ny lalam-be lehibe dia naorina tamin'ny taona 1952. Ny lalamben'i Bhutan dia manomboka eo amin'ny sisintany miaraka amin'i India, ao Phongcholing , ary mifarana any atsinanan'ny firenena, ao Trashigang. Ny halalin'ny lalana asphalt dia 2,5 m fotsiny, ary marika goavana ny marika famantarana sy famantarana. Ny bhutan dia manana fefy haingana 15 km / h. Izany dia notononina tamin'ny hoe indraindray ny lalana dia mamakivaky tanelanelan'ny tendrombohitra, izay avo lenta hatramin'ny 3000 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ankoatr'izany, ny fihotsahan'ny tany sy ny fihotsahan'ny tany dia tranga tsy miankina, noho izany, eny an-dalana dia matetika ahitana teboka manokana miaraka amin'ny mpanavotra vonona amin'ny fotoana rehetra hanomezana fanampiana rehetra.
Ny politikan'ny firenena dia tsy afaka manofa fiara ianao ary mitondra fiara tsy miankina any Bhutan. Ny visa fizahan-tany dia mitaky ny fiaraha-miasa amin'ny mpizaha tany ao Bhutan. Amin'ireo mponina ao an-toerana, ny bisy no malaza indrindra amin'ny anjara asan'ny fitateram-bahoaka any Bhutan. Saingy ny mpizahatany dia voarara ny mandeha tsy miankina na dia amin'izy ireo aza. Noho izany, ny fihetsikao rehetra dia tokony hifanaraka amin'ny sampan-draharahan'ny fiaramanidina.
Aostralia an'i Korea Atsimo
Fialantsasatra any Singapore
Diving any Malezia
Inona no havoaka avy any Kambodza?
Fialantsasatra any Indonezia
Sehatry ny Korea Atsimo
Museums any Korea Atsimo
Tontolon'ny rindrina anatiny
Sakamosina mena - tsara sy ratsy
Inona no atao hoe tantsambo?
Anembrionia - antony
Dingana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ankizy kintana 20: inona no nanjary ankehitriny?
Propolis mandritra ny fitondrana vohoka
Mijoroa amin'ny kavinao
Ny tahotra ny fiterahana - esory ny phobias
Sakafo avy amin'ny voan-katsaka - fomba mahandro sy mahazatra isan'andro
Niresaka momba ny asany miaraka amin'i Beyoncé sy Kendall Jenner ilay mpilalao styliste Marnie Senofonte
Ny tantaran'ny kintana iray faly
Phlegmon amin'ny tendany